Kulanka 36aad ee Guddiga xuquuqul Insaanka ee Geneva ayaa lagu macsuumay xubno kamid ah ururka dhalinta iyo ardayda Ogaden (OYSU). 13kii September waxay ka qayb galeen kulan diirada lagu saaray dhibaatooyinka iyo caqabadaha kasoo wajaha qaramada midoobay dadka laga tiro badanyahay, kulankan oo loogu magac daray "Ka qayb-galayasha laga tiro badanyahay ee Qaramada midoobay'
Xubno ka socda dadyoowga laga tiro badanyahay (Minority people) ayaa ka hadlay waxyaabaha aykala kulmaan Qaramada midoobay (UN), gaar ahaan caqabadaha ay iyaga iyo asxaabtoodu la kulmaan. Xubnaha ka socday ururka dhalinta iyo Ardayda Ogadeniya ayaa markooda diirada saaray dhibaatooyinka adag ee ay la kulmaan. Waxay sidoo kale ka warbixiyeen dhibaatooyinka iyo hanjabaadaha loo gaysto sifo ay u joojiyaan kasoo warbixinta xuquuqul insaanka gaar ahaan fagarayaasha Qaramada midoobey. Kulankan waxaa lagu soo saaray tababar loo fidinayo dadyowga aan lamatalin (unrepresented people).
Kulankan dhexdiisa waxaa looga dooday muhiimada "madax banaanida diinta' waxaa sidoo kale la isla cabiray dhibaatooyinka baaxada leh iyo diidmada diinta ku salaysan. Xubnaha OYSU matalayey waxay si qoto dheer uga hadleen caqabadaha ay dadka Ogadeniya la kulmaan iyo in aysan si xor ah ugu dhaqmi karin diintooda, dadka reer ogadeniya waxay xukuumada itoobiya ku shaabadeysa "argagixiso". Waxay bartilmameed kadhigataa xukuumada itoobiya shacabka reer ogadeniya iyadoo ku hoos gabanaysa sharciga waxba kama jiraanka ah ee kadhanka ah argagixisada. Maadaama uu wadanku dunida inta kale ka xiranyahay, itoobiya waxay siday doonto usoo fasirta waxyaabaha kadhacaya gayiga iyadoo isticmaalaysa eedaymo argagixisanimo. 14kii bisha September ururka dadyowga la hujuumo (the society for threatened peoples) midowga dadyowga aan cidi matalin (unrepresented nations and peoples organization) iyo ururka xuquuqul insaanka ogadeniya ayaa soo agaasimay kulan looga hadlay xaalada bini aadanimo ee ded dega ah ee ogadeniya ka taagan, kaas oo ulajeedkiisa uu ahaa sidii indhaha gudida xuququl insaanka loogusoo jeedin lahaa xalada kataagan gobalka, waxaa si faah faahsan looga hadlay abaaraha, macalusha iyo cudurka daacuunka.